Home Wararka Ururada Bulshada Rayidka oo ka gaabsaday inay go’aan adag ka qaataan khilaafka...
Ururada Bulshada Rayidka oo ka gaabsaday inay go’aan adag ka qaataan khilaafka siyaasadeed
Ururada Bulshada Rayidka oo ahaa aqooda sadaxaad ee ka hadli lahayd xaqa ayaa ka gaabsaday inay go’aan adag ka qaataan khilaafka siyaasadeed. Qoraal ay soo saareen ayay ku soo koobeen inay walaac xooggan ka muujiyay khilaafka sii cakirmaya ee u d
Qoraal kasoo baxay Urrurada Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa Madaxda ugu sareysa dalka loogu baaqay in wadahadal ku dhisan masuuliyad Qaran ay xal uga gaaraan khilaafka jira.
Bulshada rayidka waxa ay ka digeysaa in laga waantoobo aragtida danaha gaarka ee siyaasiyiinta oo sii hurin kara khilaafka siyaasadeed iyo in si khaldan loo isticmaalo awoodaha sharciga dowladnimo waxa ayna madaxda dalka u soo jeedineysa in wadahadal ku dhisan mas’uuliyad qaran ay xal uga gaaran khilaafka siyaasadeed ayaa lagu yiri” Qoraalka Urrurada Bulshada rayidka.
Qoraalka kasoo baxay Urrurada Bulshada rayidka oo aad u dheer ayaa waxaa loogu baaqay duubabka Soomaliyeed, odayaasha dhaqanka,culumo u diinka, waxgaradka, haweenka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed in ay u istaagan sidii loo heli lahaa xal dhab ah oo lagu xaqiijinayo dhameystirka khilaafka siyaasadeed.
Ururada Bulshada Rayidka ayaa waxa qayb ka ah kooxo la kala safan kooxaha isku haya siyaasadda dalka, taas ayaana keentay inay ku heshiin waayay in qaataan go”aan masiiri ah oo dalka anfacaya.